Ndị ọrụ nchekwa kwenyere na Apple kwesịrị ịkwụ ụgwọ ọzọ iji chọta chinchi | Esi m mac
Anyị agafeela etiti afọ a 2017, ma anyị enweela ike ịhụ etu ndị ọkachamara n'ihe gbasara nchekwa dị mma mgbe ha kwuru maka afọ a: malware na-eto eto. Na-amasị ya ma ọ bụ na ọ bụghị, malware na Apple bụkwa eziokwu na ụlọ ọrụ Cupertino maara ya. Na nke a, ọtụtụ ohere iji nweta adịghị ike na sistemụ arụmọrụ anyị iji nweta ozi nzuzo anyị.
Otú ọ dị, dị ka akụkọ ọhụrụ si motherboard, Gwọ ọrụ mmemme nke Apple mepụtara, nke dị adị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu afọ, iji dozie ma zere nchinchi nchedo na iOS na nyiwe macOS, enweghị inwe atụmanya a na-atụ anya ya. O doro anya na ha maara ihe kpatara ya.
O doro anya, Apple na-enye ego na-enweghị njikọ na ahịa ahịa cybersecurity dị ugbu a. Ndị ọkachamara nyocha nchekwa nchekwa na-ahọrọ ịghara inyere Apple aka na nchinchi ya na ndakpọ nchekwa n'ihi obere ọnụ ahịa ha na-enye maka enyemaka ọ bụla enyere. Ya mere, ha na-elekwasị anya na ịchọta na idozi nsogbu na sistemụ ndị ọzọ na-arụ ọrụ, dịka Windows ma ọ bụ gam akporo.
Dabere na ndị ọkachamara dị iche iche na mpaghara ahụ, ịchọta ahụhụ ma ọ bụ nsogbu nchekwa na gburugburu okike Apple "bara oke uru" ịre Apple "maka obere ego." Ya mere, azịza ya bụ ire ya na ndị ọzọ, bụ ndị o doro anya na ha na-akwụ ihe karịrị ego teknụzụ n'onwe ya.
Echefula na Apple gosipụtara mmemme ego ahụhụ ya na August 2016 gara aga, na Black Hat Conference, ihe omume cybersecurity zuru ụwa ọnụ a maara nke ọma kwa afọ. Rewardsgwọ ọrụ Apple ruru $ 200.000, dabere na otu ahụhụ ahụ achọpụtara bụ. Ọnụ ọgụgụ jọgburu onwe ya ma e jiri ya tụnyere ihe ndị na-eme ngwanrọ na-akwụ ụgwọ ha.
N'ihu ụlọ nke Apple setịpụrụ maka nchinchi kachasị dị na ya, ọdịiche dị na "ihe ruru $ 25.000" nke onye ọkachamara nwere ike ịkwụ ụgwọ maka ịchọpụta obere mmejọ ma ọ bụ na o siri ike imeghari.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » Ndị ọrụ nchekwa kwenyere na Apple kwesịrị ịkwụ ụgwọ ọzọ iji chọta chinchi